» राजु र डिलासँग राजेन्द्र र मिनाको कडा दोहोरी भिडन्त
राजु र डिलासँग राजेन्द्र र मिनाको कडा दोहोरी भिडन्त
१९ भाद्र २०७८, शनिबार १५:११
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १९ भदौ । नेपालकै पहिलो दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ मा यो हप्तादेखि उत्कृष्ट ८ को दोहोरी भिडन्त सुरु हुँदैछ । दोहोरी च्याम्पियनले यसअघि नै उत्कृष्ट ८ छनौटपछि कुन कुन समूहको बिचमा दोहोरी भिडन्त हुनेछ भनेर तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । जस अनुसार उत्कृष्ट १६ मा परेका ८ समूहको भिडन्तमा जुन जुन जोडी समूह विजेता हुन्छन् उनीहरुको बिचमा नै दोहोरी भिडन्त हुने तय भएको थियो । यस अनुसार तेस्रो हप्तामा उत्कृष्ट ८ मा परेका राजु केसी र डिला बिकसँग राजेन्द्र पाठक र मिना नेपालको कडा दोहोरी भिडन्त हुनेछ । यस भिडियो सामग्रीमा दोहोरी च्याम्पियनका उत्कृष्ट ८ मा हुने यी दुबै जोडीहरुको दोहोरी भिडन्तका बारेमा छोटो चर्चा गर्दैछौँ ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ छनौटपछिको तेस्रो दोहोरी भिडन्तमा राजु केसी र डिला बिकसँग राजेन्द्र पाठक र मिना नेपालले दोहोरी भिड्दैछन् । यी दुबै टिमले यसअघिको दोहोरी भिडन्तहरुमा दर्शक र निर्णायकहरुबाट प्रशंसा पाएका थिए । उत्कृष्ट ८ को दोस्रो दोहोरी भिडन्तमा उनीहरुको प्रस्तुति पश्चात निर्णायकहरुले दिएको अंकबाट ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत दर्शक भोटको आधारमा रिजल्ट हुनेछ । यी दुबै जोडीहरु गायक गायिकाकै रुपमा चिनिएका र लाईभ दोहोरीमा दर्शकहरुको मन जित्न सफल जोडीहरु हुन् । दुबै टिम बलियो भएकोले एकअर्कालाई पछि पार्न यो जोडीहरुले दमदार दोहोरी भिडन्त गर्नेछन् । यी दुई जोडीको यो कडा प्रतिस्पर्धामा कसले बाजी मार्ला त ? आखिर को जानेछ उत्कृष्ट ४ अर्थात सेमिफाईनलमा ? तपाईको विचारमा यी दुई जोडीमध्ये कुन जोडीको जित्ने सम्भावना बलियो छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका पाँचौँ जोडी हुन् राजु केसी र डिला बिक । उनीहरुले उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा चर्चित जोडी बबिता बानियाँ जेरी र शंकर क्षेत्रीसँग दोहोरी भिडेका थिए । यो दोहोरी भिडन्तमा राजुलाई निर्णायक रमेश बिजी र चन्द्र शर्माले फाईभ–फाईभ स्टार प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै उनलाई निर्णायक प्रजापति पराजुलीले फो स्टार र सिता थापाले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । डिलालाई निर्णायक चन्द्र शर्माले फो स्टार र अन्य निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । उनीहरुले निर्णायकहरुको मत र दर्शक भोटका आधारमा जित हासिल गरेका हुन् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका पाँचौँ जोडी हुन् राजु केसी र डिला बिक । उनीहरुले यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा निर्णायकहरुबाट ५८४.५ अंक प्राप्त गर्दै १६.५ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । यो उत्कृष्ट २४ को क्रममा सर्वाधिक बढी अंकका आधारमा हारजित भएको दोहोरी भिडन्त थियो । दोहोरीकी रानी पनि भनेर चिनिएकी डिलाको माईती सुर्खेतमा पर्छ । उनी हाल धादिङमा बसोबास गर्छिन् । उनी लोकदोहोरीकी परिचित गायिका समेत हुन् । लाईभ दोहोरीमा पनि उनको निक्कै चर्चा छ । सुर्खेत जिल्लाको विरेन्द्रनगर ११ सुब्बाकुनामा जन्मिएकी डिलाले दोहोरी गायनको क्षेत्रमा संघर्ष गरेरै नाम कमाएकी छिन् । मेलामहोत्सवमा गीत गाउन जाँदा भाडा समेत नहुने समस्याबाट गुज्रिएर अहिले उनी सबैको प्रिय गायिका बन्न सफल भएकी छिन् । गायनसँगै अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिने उदेश्यले भैरहवामा पुगेकी डिलाले संघर्षकै यात्रा गरेर पोखरामा पाईला टेकिन् । पोखराहुँदै उनी गायनमै संघर्ष गर्न वि.सं. २०७१ सालमा काठमाडौँमा पुगेकी थिईन् । उनी दोहोरी गाउने ईच्छाकै बिच सुर्खेतदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रामा उनी अनवरत संघर्ष गर्दै दोहोरी क्षेत्रमा अगाडि बढेकी छिन् ।
दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ मा पुगेका छैटौँ जोडी हुन् राजेन्द्र पाठक र मिना नेपाल । उनीहरुले उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा चर्चित जोडी प्रदिप रोका र कल्पना दाहालसँग दोहोरी भिडेका थिए । यो दोहोरी भिडन्तमा राजेन्द्रलाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए भने मिनालाई दुई जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार र दुई जना निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए ।